About Us - Shijiazhuang Yichen Plastika Floor Co., Ltd
YICHEN SOPRTS plastika Floor CO., LTD
Miaraka tsara ny finoana sy ny toetra tsara indrindra isika, dia lasa marika iraisam-pirenena mpitarika ny plastika rihana.
Shijiazhuang Yichen Sports Plastic Floor Co., Ltd, hita ao Shijiazhuang Avo-teknolojia fampandrosoana faritra, dia tafiditra orinasa famokarana, nanokana ny tenany mba rearching & fampandrosoana, mamokatra,-barotra, fametrahana sy ny asa fanompoana ho an'ny PVC plastika gorodona.
Ny orinasa hita tamin'ny 2006. Misy naniry avy-panjakana sy ny Collective Owned enterprisewho dia noforonina tamin'ny 1984, iray amin'ireo mpisava lalana ho an'ny fikarohana sy Fampandrosoana sy mamokatra PVC Flooring plastika. Manana ny matihanina tsy miankina ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny ekipa, izay miantoka ny mpitarika ao amin'ny plastika PVC Shinoa Flooring orinasa amin'ny taona maro.
Am-piandohan'ny ny fametrahana ny Yichen, isika, indrindra indrindra ny tsy miankina manome fikarohana sy fanatanjahan-tena lasa PVC Flooring andian-dahatsoratra ho an'ny ao an-toerana &
iraisam-pirenena sy ny injeniera Distributor orinasa, nahazo laza tsara indrindra avy amin'ny mpanjifa. Mandritra izany fotoana izany, isika haka tahaka ny fampandrosoana theinnovation hevitra, foana fikarohana sy fampandrosoana vokatra vaovao. Tamin'ny 2014, dia nandefa andianà Flooring ara-barotra, anisan'izany ny andian-bary vita tamin'ny marbra PVC Flooring, akanin-jaza UV andian-dahatsoratra PVC Flooring, PVC Flooring ara-barotra amin'ny hakitroky fanampian'i sns, manome kalitao avo kokoa sy
Efa lasa ny taratasy fanamarinana ISO: 9001, ISO14001, BV Frantsa, BWF sy taona sns Ankoatra izany, dia lasa mpikambana ao amin'ny efi-tranon'i Heber E-Commercial ary iray amin'ireo talen'ny orinasa tsy mivadika ny Yanzhao Antenimieran'ny E-Commercial in 2013 . Hebei Antenimieran'ny E-Commercial no voalohany fanondranana varotra ara-barotra ao amin'ny efi-tranon'i Hebei faritany.
Isika Yichen ny olona hankatò ny orinasa fanahin 'ny "hitondra tena eo amin'ny fiaraha-monina amin'ny alalan'ny fahadiovam-po, hahatratra ny asa amin'ny finoana, velona amin'ny toetra, hanana amin'ny mifanaraka." Ary raiso "Tsy misy afa-tsy ny hevitry ny eny-vanim-potoana, saingy tsy eny-fotoana tsena ; Tsy misy afa-tsy ny malemy eritreritra, fa tsy malemy tsena "toy ny fandidiana fitsipika, miasa tsara, manome kalitao ambony kokoa ny vokatra sy ny asa fanompoana tsara kokoa ho an'ny mpanjifa hafa. Yichen no safidy tsara ,. dia aoka ny miara-miasa sy miara-hanangana hoavy tsara kokoa.